Exxeo Digaag Isku Dheelitiran - Joornaalka Naqshadeynta
Digaag Isku Dheelitiran
Digaag Isku Dheelitiran EXXEO waa Elecant Hybrid Piano oo loogu talagalay meelaha casriga ah. Waa qaab gaar ah oo ay ku mideysan yihiin qaab-dhismeedka saddex geesoodka ee hirarka dhawaaqa. Macaamiisha ayaa si buuxda u habeyn kara shaashadooda si ay ula jaan qaadaan hareeraheeda iyada oo ah gabal Farshaxanka Qurxinta. Fiyadan casriga ah ee bini-aadamka waxaa laga sameeyay walxaha qalalan sida Carbon Fiber, Alaabada Automotive maqaarka iyo Aerospace fasalka Aluminium. dib u soo kicisaa farqiga ballaaran ee firfircoon ee Grandianiya iyada oo loo marayo 200 Watts, 9 nidaamka codka codka. Waxay u heellan tahay baytariga ku dhex-jira gudaha u suurta geliya piano-ga inuu qabto illaa 20 saacadood oo hal kicitaan ah.
Magaca mashruuca : Exxeo, Magaca naqshadeeyayaasha : iMAN Maghsoudi, Magaca macmiilka : EXXEO.
Digaag Isku Dheelitiran iMAN Maghsoudi Exxeo